WARARKA HORE – Welcome to the Somali Government Portal!
Welcome to the Somali Government Portal!
Office of the Parliament Speaker
Somali Media Empire List
WARARKA MAANTA Janaayo 14ka 2019 Sir Culus!
Su;aalaha Maanta: Maxuu Khaa’inul waddan Ra’iisal wasaare Kheyre uu Baarlamaanka ugu gudbiyay xeerka wax ka badalka Agaasinka Bangiga Dhexe? Maxuu Khaa’inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre “Bakhti-Raam-Sade” u rabaa inuu Guddoomiyaha Bangiga Dhexe u magacaabo nin ajinabi/shisheeye ah oo weli Ingiriis ah xiriir la leh Shirkaddii Soma Oil and Gas kaasoo kala qaybtii iyo cadownimadda ay u qabeen Ummadda Soomaaliyeed ay u kala qeybiyeen 5 qeybood xilligii gummaysiga ay ku hayeen dhulka Soomaalida degto ee Geeska Afrika iyo gabi ahaanba qaarada Afrika? Ma waxaa la waayey qof aqoonyahan Soomaaliyeed oo shaqadaas qabta? Mise ninkan waxuu kamid ahaa raggii sida tooska ah iyo sida dadbanba magaca Ummadda Soomaaliyeed ku xalaalaysan jiray dhaqaallaha iyo deymaha lagu sii qaamaynaayo magaca Ummadda Soomaaliyeed? Maxay tahay sababta ninkan Ingiriiska ah ee loogu magacaabayo Guddoomiyaha Bangiga Dhexe? Maxayse xukuummadda fashilantay ee Khaa’inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre “Bakhti-Raam-Sade” u samayn/magacaawi waayeen Guddigga Garsoorka Qaranka Iyo Hay’adda La-Dagaalanka Musuqmaasuqa? Maxay Dowladda Soomaaliya ee wada dadban umalaynaysaa inay shacabka runta ka qarin karto? Yaa noqon doona Madaxweynaha soo socda? Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda? Yaa noqon doona Guddoomiyaha Aqalka Sare ee soo socda? Ha wiqleyso!
Muqdisho Janaayo 14ka 2019 Ra’iisal wasaare Kheyre oo Baarlamaanka u gudbiyay xeerka wax ka badalka Agaasinka Bangiga Dhexe. Akhriso-Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa u gudbiyay Golaha Shacabka xeerka wax ka badalka guddiga Agaasinka Bangiga dhexe ee Soomaaliya oo lagu waddo in uu maanta ka dooddo Golaha.
Muqdisho Janaayo 14ka 2019 Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu waddaa in maanta oo Isniin ah kulan xasaasi ah ku yeeshaan xaruntooda magaalada Muqdisho, iyaga oo ka dooddi doona wax ka badalka xeerka Bangiga. Arrintan ayaa dood adag ka dhax abuurtay mushtamaca Soomaaliyeed kaddib uu soo baxay war ku saabsan in sababta wax ka badalka loogu sameynayo xeerka Bangiga uu yahay sidii qof Ajnabi ah loogu dhiibi lahaa guddoonka sare ee Bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Maamulka Jubbaland Janaayo 14ka 2019 Wararka naga soo gaaraya degmada Bu’aalle ee gobolka Jubbada dhexe ayaa sheegaya in dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab toogasho ku dileen sarkaal ka tirsanaa Ururka Daacish oo siweyn isaga oo horjeedaa Al-shabaab. Sarkaalkan toogashada lagu dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Yaxye Xaaji Fiile, oo loo yaqaaney [Abu Zakariye] waxaana ay ku eedeeyeen Al-shabaab in uu ka tirsan yahay Ururka Daacish.
Muqdisho Janaayo 14ka 2019 Wasiirka Maaliaydda Somaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle mar uu warbaahinta la hadlayay ayuu ka waramay waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda Maaliyadda intii uu joogay iyo qorshahooda sanadkan 2019 ee bilowga ah. Wasiirka Maaliaydda Somaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle mar uu warbaahinta la hadlayay ayuu ka waramay waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda Maaliyadda intii uu joogay iyo qorshahooda sanadkan 2019 ee bilowga ah.
Muqdisho Janaayo 14ka 2019 Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa looga digay inay ansixiyaan sharciga Hanti Dhowrka Qaranka oo horyaala, kaasi oo maanta la filayo inay ansixiyaan.
Ku xigeenka Koowaad ee Hanti dhowrka Qaranka Cali Abuukar Axmed ayaa isaga oo warbaahinta la hadlayay wuxuu sheegay inuu ka digayo in baarlamaanka ansixiyaan sharciga Hanti dhowrka Qaranka.
Wuxuu sheegay in sharcigaasi uu yahay mid awood uusan laheyn siinayo Hanti dhowrka Qaranka, isaga oo sheegay in Hanti Dhowrka Qaranka uu noqon doono ruux awood leh sida madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha.
Wuxuu sheegay inuu ka madax banaaneynayo sharcigaasi xafiisyada golaha Fulinta, islamarkaana uu xasaanad gaar ahaaneed uu yeelan doono hanti dhowraha, taasi oo ka dhigeyso inuu ka bixi doono Shanta Kaabayaasha dhaqaalaha la isku yiraahdo.
Wuxuu sidoo kale sheegay in Hanti dhowraha Qaranka uu shaqo la’aan ka dhigay shaqaalo ka tirsanaa xafiiska, kuwaasi oo muddo ka shaqeynayay Handhowrka, taasi badalkeedana uu la yimid halinyaro badan oo ay isku reer yihiin.
Cali Abuukar, ku xigeenka koowaad ee xafiiska Hanti dhowrka, ayaa dhinaca kale ka hadlay shaqaalo ka tirsan Xafiiska oo looga yeeray xarunta hay’adda Dambi baarista ee CID, kuwaasi oo uu sheegay inay ka amar qaadanayeen Hanti dhowrka.
Wuxuu sheegay in shaqaalaha la wareystay ee ka tirsan Xafiiska Hanti dhowrka, inay yihiin kuwii uu shaqo la’aanta ka dhigay, islamarkaana uu doonayo in dambiyo aysan laheyn lagu eedeeyo.
Ugu dambeyn wuxuu madaxda ugu sareyso dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay soo fara geliyaan xiisadda ka taagan xafiiska Hanti dhowrka Qaranka.
Muqdisho Janaayo 14ka 2019 Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka qeyliyey qorshe uu sheegay inayn ka dambeyso Villa Somalia, oo magaciisa looga been abuurtay, kaasi oo ka socda facebook.
Waxaa baraha bulshada si wayn loo wareejiyey bog been abuur ah oo qoraalka ku qoran la ii tiirinayo. Bogaygu waa hubsan yahay (verified) oo waxaa saaran calaamada buluuga ah ee bogaga rasmiga ah lagu garto. Tan kale, maadaama ay adagtahay in magacayga oo sax ah bog kale lagu sameeyo, waxaa si isdaba maris ah lagu sameeyey magaca bogga been abuurka ah
Muqdisho Janaayo 14ka 2019 Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in baarlamaanka uu horyaalo sharciga ama xeerka Bangiga dhexe oo la doonayo in wax laga badalo.
Xildhibaanka ayaa sheegay in xeerkaasi maanta xildhibaanada baarlamaanka la horgeyn doono, marka guddoomiyaha baarlamaanka ogolaado kadibna ay ka doodi doonaan xildhibaanada golaha Shacabka.
Wuxuu sheegay in sharcigaasi baarlamaanka uu kaga yimid dhanka xukuumadda Soomaaliya, isaga oo sheegay iney qabto yahay sida lagu geeyay golaha shacabka.
“Sharcigaasi waxaan idiin cadeynayaa inuu horyaalo golaha shacabka, dhanka xukuumadda ayuuna naga soo gaaray, Sharcigaasi waa mid Surwaal kaliya uu ugu jiro waa feero qaawan yahay oo shaar uguma jiro”ayuu yiri xildhibaanka.
Arintaasi ayaa dhalisay hadal heyn badan, maadaama haddii wax laga badalo xeerka Bangiga dhexe ay ka dhigan tahay in ruux ajnabi ah uu qaban karo guddoonka Bangiga Dhexe.
Dhinaca Xildhibaanka ayaa ka hadlay ruuxa ajnabiga ah ee la hadal hayo in laga dhigayo guddoomiyaha Bangiga dhexe, wuxuuna sheegay inay taasi sabab u tahay in Soomaalida dhankooda ay haweysteen inay xilal ka qabtaan dalalka kale caalamka.
“Marka aad adiga haweysato wax dadow adna waxaada waa lasoo haweysanayaa, arintaan waxay keeni doontaa dood adag oo dadka aysan ku baraarugsaneyn”ayuu hadalkiisa ku daray xildhibaan Dalxa.
Muqdisho Janaayo 14ka 2019 Waxaa si weyn la’isula dhexmaraa in dowladda Federal-ka ah ay Bangiga dhexe ee dalka u magacaabi doonto shaqsi ajinabi ah.
Tallaabadan oo aan wali si rasmi ah u dhaqan galin, ayaa waxaa ka dhashay dood iska soo horeedda oo ay qaar qabaan in dowladda ku qaldan tahay qaarna ay soo dhaweeyeen.
Isniinta maanta ah ayey baarlamaanka u codeyn doonaan sidii meesha looga saari lahaa sharci diidaya in qof aan Soomaali ahayn loo dhiibi karo Bangiga si loogu gogol xaaro shaqsiga ay dowladda jagadaas la dooneyso.
Walow aysan wali caddeyn qofka ay dowladda xilkaas u magacaabi doonto iyo dalka uu u dhashay, hadana waxa ay u muuqataa in dowadda 3-dan qodob faa’iido ahaan uga dhex arki karto tallaabadaas.
Waxaa si weyn la’isula dhexmaraa in dowladda Federal-ka ah ay Bangiga dhexe ee dalka u magacaabi doonto shaqsi ajinabi ah.
Maamulka Somaliland Janaayo 14ka 2019 Wasiirka Shaqada iyo arimaha Bulshada Somaliland Hindia Jaamac Gaani ayaa shaacisay in dhalinyaro ku sugan magaalada Hargeysa ay ku xiran yihiin xafiiska madaxweyne Farmaajo.
Hinda Jaamac oo dhalinyaro badan la hadlaysay ayaa sheegtay in dhalinyaro badan ay ku xiran yihiin xafiiska madaxweyne Farmaajo, islamarkaana ay dhaqaalo badan qaataan.
Waxay sheegtay in dhalinyaradaasi ay dhaqaalaha ku qaataan sidii ay u kala qeybin lahaayeen shacabka Somaliland, iyaga oo cadeysay inay xog badan ka hayaan dhalinyarada ku xeran xafiiska madaxweyne Farmaao.
“Runtii Socail media dagaal ad u fara badan ayaa ka socdo, waxaana ognahay in dhalinyarada dagaalka sameynaya waa dad la adeegsado oo laga maamulo xafiiska Farmaajo, waxay inoo kala sameeyaan reero iyo magacyo”ayay tiri Wasiirka shaqada ee Somaliland.
Hinda Jaamac, ayaa sheegtay in dhalinyaraadi ay qeyb ka qaadanayaan duminta Somaliland, balse loo baahan yahay in dhalinyarada kale ee Somaliland ka fakaraan mustaqbalkooda.
“Dhalinyarada iyo dadka halkaan jooga ee ku xiran xafiiska madaxweyne Farmaajo yaaneyn dalka naga burburin, waa in dhalinyarada kale ay u istaagaan sidii la isaga qaban lahaa”ayay hadalkiisa saacisay Hinda Jaamac.
Maamulka Puntland Janaayo 14ka 2019 Siciid Cabdullahi Deni waa ganacsasde isu rogay siyaasi. Wuxuu ku dhashay, kana dhigtay waxbarashadiisa illaa heerka koowaad ee jaamacadda magaalada Muqdisho. Ka dib wuxuu galay jaamacad ku taal Malaysia oo uu ka qaatay shahaadada heerka labaad ee jaamacadda.
8-dii Janaayo 2019-ka wuxuu ku guulaystay in loo doorto madaxwaynihii 5aad ee Puntland